पहिरो पन्छाउँदा भेटिएकी सानुमायाकी आमा छोरीको तस्बिरले र’साए सबैका आँखा – Sanchar Patrika
पहिरो पन्छाउँदा भेटिएकी सानुमायाकी आमा छोरीको तस्बिरले र’साए सबैका आँखा
August 23, 2020 201
सिन्धुपाल्चोक— जुगल गाउँपालिका–२ लिदी, लामागाउँ दस दिनयता निरन्तर शो’कमा छ । गाउँ नै छोपिने गरी खसेको पहिरोबाट दिनहुँजसो श’व निकालिँदै छन् । शनिबार पनि उद्धार टोलीले पहिरो पन्छाएर दुई श’व निकाल्यो । केही दिनयता चित्त बुझाउन थालेका स्थानीयले यो दृश्य देख्दा भने मन थाम्न सकेनन् ।
पहिरोले प्राण लगिसक्दा पनि ३५ वर्षीया सानुमाया दोङ चारवर्षे छोरी करिस्मालाई पि’ठ्युँमा बोकिरहेकै थिइन् । त्यो अवस्थामा एकसाथ आमाछोरीको श’व देख्दा स्थानीयका आँखा भरिएर आए । सुरक्षाकर्मी पनि मास्क मिलाउने बहानामा आँसु लुकाइरहेका थिए । उनीहरू गल, कोदालो र पिक थन्क्याएर एक छिन सुस्ताए । ‘साँच्चै मान्छे म’र्दा पनि आमाको माया नमर्ने रहेछ, यो दृश्यले रोकेर राखेको मनलाई रुवाएरै छाड्यो,’ एक सुरक्षाकर्मीले भने ।
इलाका प्रहरी जलबिरेका प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईका अनुसार आमाछोरी दुवैको दाह’संस्का’र सकिए पनि त्यो दृश्यले अझै सबैलाई रुवाइरहेकै छ । सानुमाया गाउँकी सबैकी प्यारी थिइन् । लिदीमा अधिकांशलाई नेपाली भाषा कम आउने भएकाले उनी तामाङ भाषामै कुरा गर्थिन् । गाउँभरका बालबालिका र गर्भवतीको विशेष ख्याल राख्थिन् ।
नौ दिनपछि श्रीमतीको श’व भेटिँदा च्याङ्बा विक्षिप्त छन् । पहिरो आउँदा श्रीमान् च्याउ खोज्न र सासू बाहिर काममा गएका थिए । पहिरोको ड’रले राति माथिल्लो गोठमा बस्दै आएको परिवार बिहान पाँच बजेतिर मात्रै लामागाउँको पुरानो घर फर्किएको थियो ।
आमाछोरीको श’व निकालिएलगत्तै आकाश रो’एझैं एक्कासि पानी दर्किन थाल्यो । पहिरोमा पुरिएका अन्नपात र पशु कुहिएकाले गाउँमा दु’र्गन्ध फैलिएको छ । त्यसलाई रो’क्न ‘क्लो’रिन’ छर्किए पनि केही असर गरेको छैन । मास्ककै भरमा पहिरो पन्छाइरहेका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय वर्षातसँगै पहिरो आउने ड’रले उत्खनन रो’के ।
पहिरोमा पुरिएका १७ घरका ३९ जनामध्ये आइतबार बिहानसम्म ३२ को श’व फेला परेको छ । तिनमा सत्र बालबालिका, दस महिला र पाँच पुरुष छन् ।
Prevआज सुनको मुल्यमा यति धेरै गिरावट ? हेर्नुहोस, यस्तो छ बजार भाउ
Nextमुटु शरीर बाहिर भएकी ५ वर्षकी बालिका ,देखेर नी न देखें जस्तो नगर्नु होला !
काठमाडौं उपत्यकामा १५९ जनामा कोरोना संक्रमण
कोरोनाका कारण रोकिएको त्रिविको स्थगित परीक्षा असोजभित्रै हुने
देशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! (5061)
रुकुम घटनामा वडाध्यक्षको गल्ती छैन’ भन्दै जनार्दन शर्माले बोल्न थालेपछि संसदमा होहल्ला (3831)
बुटवलमा जब गर्भवती महिलालाई अप्रेसन गर्नु अघि चिकित्सकले कारोना भएको थाहा पाएपछि…डाक्टरले जे गरे त्यसले बनायो सबैलाई चकित (3226)
१८ साताकी गर्भवती महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि, जङ्गलमा लगेर यसरि गरियो दाहसंस्कार (2646)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2359)